कुखुरा पालनमा कोरोनाको असर
As of Sun, 07 Jun, 2020 03:30
झापा-कोरोना भाइरसका कारण मुलुक भरकै कुखुरा पालन व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको छ । कुखुराको मासु र अण्डा बिक्री नहुँदा व्यवसायमा जोखिम बढ्दै गएको हो । प्रदेश –१ मा मात्र ६ सय जना पोल्ट्री व्यवसायी अहिले कुखुरा बिक्री नहुँदा मारमा परेका छन् । मासु खाँदा कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने निराधार हल्लाका कारण कुखुरा र अण्डा बिक्री नहुदाँ व्यवसाय नै संकटमा पर्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । मासुको मूल्यमा एक्कासी आएको गिरावटका कारण कुखुराको खर्च धान्न नसकेपछि प्रदेश–१ का व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आएको हो । किसानका खोरमा भएका कुखुरा बिक्री नहुँदा मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेश–१ का ४ हजार किसान पोल्ट्री व्यवसायमा आवद्ध छन् । ४ हजार किसानको फार्मबाट प्रतिदिन ३ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा प्रतिहप्ता ३० लाख किलो मासु उत्पादन हुने नेपाल अण्डा उत्पादक संघ प्रदेश –१ का अध्यक्ष माधव पराजुली बताए । माछा मासुबाट कोरोना सर्छ भन्ने हल्लाकै कारण अहिले किसानले उत्पादन गरेका कुखरा फार्ममा रहेका उनी बताउँछन् । पराजुली सरकारले अण्डाको उपभोगबाट हुने फाइदाबारे जनचेतना फैलाउन नसकेको र निराधार हल्ला गर्नेलाई कारवार्हीको दायरामा ल्याउन नसकेको कारण व्यवसाय नै धरापमा परेको तर्क गर्छन् ।
विश्वको तुलनामा ३३ प्रतिशत नेपालीले मात्र अण्डा र माछा मासुको उपभोग गर्ने तथ्यांक रहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । पराजुलीले झापामा देवी पाथिभरा एग्रो प्रालि सञ्चालनमा ल्याएर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । दाना, अ‍ैषधिको मूल्य बढी रहेको अवस्थामा अण्डा र कुखुरा बिक्री नहुँदा किसानलाई थप मार परेको उनको भनाइ छ । पोल्ट्री व्यवसायमा विद्युत् खपत पनि धेरै हुन्छ पराजुलीले भने, “मासुको बजारमा आएको गिरावटले देशभरकै पोल्ट्री व्यवसायी संकटमा छन् ।”
सुनसरीका भरत कार्कीको फार्ममा २५ हजार कुखुरा छन् । मासुबाट कोरोना भाइरस सर्ने हल्लाका कारण कुखुरा बिक्री हुन छाडेको दुखेसो कार्की गर्छन् । “मासुको खपत दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ” कार्कीले भने । उनले मासु पसल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । “पहिले हरेक दिन ५० वटासम्म कुखुरा बिक्री हुन्थ्ये, अहिले १० वटामा झरेको छ” कार्कीले भने, “कोरोनाको नाममा कालोबजारी पनि मौलाएको छ, दक्षिणी सीमाबाट रात–रात कुुुखुरा नेपाल भित्रिन्छन् ।” कुखुरा बिक्री नभएको कारण दाना खपत पनि बढेको उनले जनाए । “एउटा कुखरा ४० देखि ४५ दिन भित्रमा बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ यस अवधिमा एउटा कुखुराले ५ किलोसम्म दाना खान्छ अहिले बिक्री नभएकै कारण दाना खपत पनि बढेको छ” उनले भने, “जसले गर्दा प्रतिकुखुरा दैनिक ८÷१० रुपैयाँ खर्च बढेको छ, किसानले बैंकको लोनसम्म तिर्न सकिरहेका छैनन् ।” सुनसरीका कतिपय स्थानीय तहले नै कोरोनाबाट बच्न माछामासु नखानु भन्ने प्रचार गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।
नेपाल अण्डा उत्पादक संघले १३ किलो भन्दा धेरै प्रतिक्रेट अण्डाको मूल्य २८० र १३ किलो भन्दा कम प्रतिक्रेट अण्डाको मूल्य २५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । संघले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार किसानले प्रति कार्टुन अण्डा २७ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले प्रदेश १ का किसानले प्रतिकार्टुन अण्डा १८ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि उत्पादित अण्डा बिक्री नभएको गुनासो झापा दमकका पोल्ट्री व्यवसायी जगत चम्लागाईँको छ । युवा आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर बनेको यस पेशाबाट कृषक विस्थापित हुने अवस्था आएको चम्लागाईँको भनाइ छ । विभिन्न समयमा देखिने रोगका कारण समस्यामा पर्दै आएका पोल्ट्री व्यवसायी भारतबाट आयात हुने अवैध मासु र अण्डाका कारण पनि मर्कामा पर्ने चम्लागाईँको भनाइ छ ।
दमक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा. खड्कलाल पहेम लिम्बू माछा मासुबाट कोरोना सरेको तथ्य नभए पनि अफवाह फैलिएको बताउँछन् । माछा मासु सफा र ताजा हुनु पर्ने साथै राम्रोसँग पकाएर खाँदा कुनै पनि समस्या नहुने डा. लिम्बूको भनाइ छ ।
नेपालमा कुखुरा जन्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३० अर्ब बढी लगानी भइसकेको तथ्यांक छ । दानाको मूल्य बढेका कारण पनि कृषक समस्यामा रहेका छन् । गत वर्षको तुलानामा यस वर्ष दानाको मूल्य २५ प्रतिशतले वृद्धी भएको व्यवसायी चम्लागाईँ बताउँछन् । दानाको मूल्य वृद्धि, अण्डाको बजार अभावका कारण व्यवसाय संकटमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले पनि व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । समय समयमा बर्डफ्लूको समस्यालेसमेत पीडित बन्ने गरेको यो क्षेत्र अहिले मासु र अण्डा बिक्री नहुदाँ समस्यामा छ ।